skincare အနေနဲ့ လူသုံးများနေတဲ့ soothing gel ရဲ့ တကယ့်လုပ်ဆောင်ချက်တွေက ဘာတွေလဲ ? -
Posted on March 12, 2019 March 12, 2019 Author Hnin Ei Oo	Comment(0)
ထင်ထားတာနဲ့ လွဲနေတာမျိုး ဖြစ်နေနိုင်တာမို့ ဖတ်ထားသင့်တယ်နော်။ 🙂
Aloe Vera Soothing Gel ဆိုတာ ဘေးဘီပတ်ဝန်းကျင်မှာ လက်ညှိုးထိုးမလွဲရှိနေတဲ့ အလှကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုပါပဲ။ ဈေးနှုန်းကလည်း သင့်တင့်တဲ့အပြင် တစ်ခုတည်းကို ရှစ်မျိုးတောင်သုံးလို့ရတာဆိုတော့ ဘက်ဂျက်သမားတွေနဲ့ အံကိုက်ပဲပေါ့။ ဒါပေမဲ့လည်း ထုံးစံအတိုင်း ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ ဝယ်သူကြားထဲမှာ ကွာဟချက်လေး အနည်းငယ်တော့ရှိနေပါတယ်။ အဲ့တော့ မနေနိုင်မထိုင်နိုင် မနှင်းအိဦးက ထပ်ပြီးတော့ လျှာရှည်ပါဦးမယ်နော်။
Soothing Gel ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် ၈ မျိုးကတော့
(၁) အသားအရေကို အေးမြစေတယ်
(၂) နေလောင်ထားတဲ့ အသားအရေကို Cooling effect နဲ့ပြန်လည်ကုသပေးနိုင်တယ်
(၃) မိတ်ကပ်အောက်ခံအနေနဲ့ အသုံးပြုလို့ရတယ်
(၄) အမွှေးရိတ်ပြီးတဲ့အချိန် After Shave အနေနဲ့ သုံးလို့ရတယ်
(၅) လက်သည်းခြေသည်းလေးတွေကို လိမ်းပေးရင် လက်သည်းခြေသည်းလေးတွေ ကြည်လင်ပြီး အရှည်မြန်လာစေတယ်
(၆) ဆံပင်အဖျားနှစ်ခွတွေကို ကုသဖို့အတွက် Hair Essense အနေနဲ့သုံးလို့ရတယ်
(၇) နွေရာသီမှာ အသားလောင်တာတွေ သက်သာဖို့အတွက် cooling gel အနေနဲ့သုံးလို့ရတယ်
(၈) Body Lotion အနေနဲ့လည်း သုံးပေးလို့ရပါတယ်။
ပြဿနာဖြစ်နေတာက အသားအရေကို အေးမြစေတဲ့ effect ပေးတာကို ရေဓာတ်ဖြည့်တင်းပေးတယ်ဆိုပြီး လွဲနေကြတာပါ။ Soothing Gel က Moisturizer လုံးဝမဟုတ်ပါဘူးနော်။ နောက်ပြီး Gel အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့အတွက် အသားခြောက်သူတွေထက် အဆီပြန်တတ်တဲ့လူတွေနဲ့ ပိုပြီးသင့်တော်ပါတယ်။
Related Article >>> အလှကုန် အတုတွေ ဝယ်သုံးမိရင် ဘယ်လိုဒုက္ခတွေ ကြုံရမလဲ?
နောက်တစ်မျိုးရှိသေးတယ်။ Soothing Gel ရှိနေရင် ကျန်တဲ့ဘာ Skincare မှသုံးစရာမလိုတော့ဘူးလို့ စိတ်ထဲစွဲနေတာ။ တကယ်မလိုအပ်မှတော့ယောင်းရယ် ဆိုင်အားလုံးဒီလိုဈေးနှုန်းသင့်တင့်ပြီး Customer Demand (စားသုံးသူရဲ့တောင်းဆိုမှု) များတဲ့ပစ္စည်းကိုပဲ ထိုင်ထုတ်နေတော့မှာပေါ့။ နှင်းသေချာရှင်းပြမယ်။ နှင်းတို့ရဲ့အသားအရေမှာ အလွှာ ၃ လွှာရှိတယ်ဆိုတာ ယောင်းတို့သိကြတယ်ဟုတ်? ဒီ Soothing Gel က နှင်းတို့အသားအရေရဲ့ ပထမဦးဆုံးအလွှာကိုပဲ အထောက်အပံ့ဖြစ်စေပြီး သာမန်လောက်ပဲထိန်းသိမ်းပေးနိုင်တာမျိုးပါ။ အဲ့အတွက် အရေးအကြောင်း၊ အမဲစက်၊ ဝက်ခြံစတဲ့ အရေပြားအတွင်းပိုင်းပြဿနာတွေကို မဖြေရှင်းပေးနိုင်တာမို့ တခြား တိုနာ၊ Essense၊ Cream စတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်း မဝယ်မဖြစ်ဝယ်သုံးရပါမယ်။ (ဒါမှလည်း ထိရောက်မှာကိုး။)
နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ စိတ်ချရတဲ့ Brand ပစ္စည်းကိုမသုံးဘဲ တရုတ်၊ ယိုးဒယားအောက်လမ်းကဝင်တဲ့ Soothing Gel ကို ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ သုံးကြတာပါ။ ဘယ်ဘူးကိုကြည့်ကြည့် ရှားစောင်းလက်ပက်ပဲလေ ဘာကွာလို့လဲဆိုရင် သူ့မှာပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေ၊ ထုတ်လုပ်တဲ့နည်းပညာအဆင့်ဆင့်တွေ ကွာခြားပါတယ်။ နာမည်အရမ်းကြီးတဲ့ Brand မတတ်နိုင်ရင်တောင် နှင်းတို့ ပြည်တွင်းဖြစ် Brand ထဲက ပစ္စည်းကိုရှာသုံးပါ။ ဒီလိုအတုတွေကြောင့် အသားအရေပျက်စီးပြီး လူတောမတိုးရဲတဲ့အထိ ဖြစ်သွားနိုင်တာမို့ ရေရှည်ကိုတွေးပြီး စိတ်ချရတဲ့ပစ္စည်းကိုပဲ သုံးပါလို့နှင်းကတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
ရှားစောင်းလက်ပတ်ဆိုတာ အင်မတန်မှ အသားအရေနဲ့ ဆံပင်အတွက် အကျိုးရှိတဲ့အပင်ပါ။ ဒါပေမဲ့ တချို့လူနည်းစုထဲမှာ ဒီရှားစောင်းလက်ပက်နဲ့ ဓာတ်မတည့်တာမျိုးရှိတတ်တာမို့ လူတိုင်းနဲ့တည့်တာပဲ ငါလည်းရမှာပါဆိုပြီး မျက်နှာပေါ် အလွယ်တကူလိမ်းတာမျိုးတွေ လုံးဝမလုပ်ပါနဲ့နော်။ ဘယ်ကုန်ပစ္စည်းကိုမဆို Allergy test (အသားအရေပေါ်စမ်းသပ်ခြင်း) လုပ်ပါ။ နှင်းရဲ့ယောင်းယောင်းလေးတွေအားလုံး အန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့ လှနိုင်ကြပါစေရှင်။
Aloe Vera Soothing Gel ဆိုတာ ဘေးဘီပတျဝနျးကငျြမှာ လကျညှိုးထိုးမလှဲရှိနတေဲ့ အလှကုနျပစ်စညျးတဈခုပါပဲ။ ဈေးနှုနျးကလညျး သငျ့တငျ့တဲ့အပွငျ တဈခုတညျးကို ရှဈမြိုးတောငျသုံးလို့ရတာဆိုတော့ ဘကျဂကျြသမားတှနေဲ့ အံကိုကျပဲပေါ့။ ဒါပမေဲ့လညျး ထုံးစံအတိုငျး ကုနျပစ်စညျးနဲ့ ဝယျသူကွားထဲမှာ ကှာဟခကျြလေး အနညျးငယျတော့ရှိနပေါတယျ။ အဲ့တော့ မနနေိုငျမထိုငျနိုငျ မနှငျးအိဦးက ထပျပွီးတော့ လြှာရှညျပါဦးမယျနျော။
Soothing Gel ရဲ့ လုပျဆောငျခကျြ ၈ မြိုးကတော့
(၁) အသားအရကေို အေးမွစတေယျ
(၂) နလေောငျထားတဲ့ အသားအရကေို Cooling effect နဲ့ပွနျလညျကုသပေးနိုငျတယျ
(၃) မိတျကပျအောကျခံအနနေဲ့ အသုံးပွုလို့ရတယျ
(၄) အမှေးရိတျပွီးတဲ့အခြိနျ After Shave အနနေဲ့ သုံးလို့ရတယျ
(၅) လကျသညျးခွသေညျးလေးတှကေို လိမျးပေးရငျ လကျသညျးခွသေညျးလေးတှေ ကွညျလငျပွီး အရှညျမွနျလာစတေယျ
(၆) ဆံပငျအဖြားနှဈခှတှကေို ကုသဖို့အတှကျ Hair Essense အနနေဲ့သုံးလို့ရတယျ
(၇) နှရောသီမှာ အသားလောငျတာတှေ သကျသာဖို့အတှကျ cooling gel အနနေဲ့သုံးလို့ရတယျ
(၈) Body Lotion အနနေဲ့လညျး သုံးပေးလို့ရပါတယျ။
ပွဿနာဖွဈနတောက အသားအရကေို အေးမွစတေဲ့ effect ပေးတာကို ရဓောတျဖွညျ့တငျးပေးတယျဆိုပွီး လှဲနကွေတာပါ။ Soothing Gel က Moisturizer လုံးဝမဟုတျပါဘူးနျော။ နောကျပွီး Gel အမြိုးအစားဖွဈတဲ့အတှကျ အသားခွောကျသူတှထေကျ အဆီပွနျတတျတဲ့လူတှနေဲ့ ပိုပွီးသငျ့တျောပါတယျ။
Related Article >>> အလှကုနျ အတုတှေ ဝယျသုံးမိရငျ ဘယျလိုဒုက်ခတှေ ကွုံရမလဲ?
နောကျတဈမြိုးရှိသေးတယျ။ Soothing Gel ရှိနရေငျ ကနျြတဲ့ဘာ Skincare မှသုံးစရာမလိုတော့ဘူးလို့ စိတျထဲစှဲနတော။ တကယျမလိုအပျမှတော့ယောငျးရယျ ဆိုငျအားလုံးဒီလိုဈေးနှုနျးသငျ့တငျ့ပွီး Customer Demand (စားသုံးသူရဲ့တောငျးဆိုမှု) မြားတဲ့ပစ်စညျးကိုပဲ ထိုငျထုတျနတေော့မှာပေါ့။ နှငျးသခြောရှငျးပွမယျ။ နှငျးတို့ရဲ့အသားအရမှော အလှာ ၃ လှာရှိတယျဆိုတာ ယောငျးတို့သိကွတယျဟုတျ? ဒီ Soothing Gel က နှငျးတို့အသားအရရေဲ့ ပထမဦးဆုံးအလှာကိုပဲ အထောကျအပံ့ဖွဈစပွေီး သာမနျလောကျပဲထိနျးသိမျးပေးနိုငျတာမြိုးပါ။ အဲ့အတှကျ အရေးအကွောငျး၊ အမဲစကျ၊ ဝကျခွံစတဲ့ အရပွေားအတှငျးပိုငျးပွဿနာတှကေို မဖွရှေငျးပေးနိုငျတာမို့ တခွား တိုနာ၊ Essense၊ Cream စတဲ့ပစ်စညျးတှကေိုလညျး မဝယျမဖွဈဝယျသုံးရပါမယျ။ (ဒါမှလညျး ထိရောကျမှာကိုး။)
နောကျဆုံးတဈခုကတော့ စိတျခရြတဲ့ Brand ပစ်စညျးကိုမသုံးဘဲ တရုတျ၊ ယိုးဒယားအောကျလမျးကဝငျတဲ့ Soothing Gel ကို ယုံယုံကွညျကွညျနဲ့ သုံးကွတာပါ။ ဘယျဘူးကိုကွညျ့ကွညျ့ ရှားစောငျးလကျပကျပဲလေ ဘာကှာလို့လဲဆိုရငျ သူ့မှာပါဝငျတဲ့ပစ်စညျးတှေ၊ ထုတျလုပျတဲ့နညျးပညာအဆငျ့ဆငျ့တှေ ကှာခွားပါတယျ။ နာမညျအရမျးကွီးတဲ့ Brand မတတျနိုငျရငျတောငျ နှငျးတို့ ပွညျတှငျးဖွဈ Brand ထဲက ပစ်စညျးကိုရှာသုံးပါ။ ဒီလိုအတုတှကွေောငျ့ အသားအရပေကျြစီးပွီး လူတောမတိုးရဲတဲ့အထိ ဖွဈသှားနိုငျတာမို့ ရရှေညျကိုတှေးပွီး စိတျခရြတဲ့ပစ်စညျးကိုပဲ သုံးပါလို့နှငျးကတိုကျတှနျးခငျြပါတယျ။
Related Article >>> အသားအရေ မညီခွငျးအတှကျ အိမျတှငျးကုထုံးမြား
ရှားစောငျးလကျပတျဆိုတာ အငျမတနျမှ အသားအရနေဲ့ ဆံပငျအတှကျ အကြိုးရှိတဲ့အပငျပါ။ ဒါပမေဲ့ တခြို့လူနညျးစုထဲမှာ ဒီရှားစောငျးလကျပကျနဲ့ ဓာတျမတညျ့တာမြိုးရှိတတျတာမို့ လူတိုငျးနဲ့တညျ့တာပဲ ငါလညျးရမှာပါဆိုပွီး မကျြနှာပျေါ အလှယျတကူလိမျးတာမြိုးတှေ လုံးဝမလုပျပါနဲ့နျော။ ဘယျကုနျပစ်စညျးကိုမဆို Allergy test (အသားအရပေျေါစမျးသပျခွငျး) လုပျပါ။ နှငျးရဲ့ယောငျးယောငျးလေးတှအေားလုံး အန်တရာယျကငျးကငျးနဲ့ လှနိုငျကွပါစရှေငျ။
Tagged all, aloe, basic, Gel, In, one, skincare, soothing, vera
နွေရာသီမှာ တောက်တောက်ပပလေး လှနေဖို့ မိတ်ကပ်ဒီလိုလိမ်းကြည့်မယ်
Posted on March 28, 2018 March 28, 2018 Author Myat Moe
တစ်ဆောင်းကုန်လို့ တစ်နွေကူးလာပြန်ပြီဆိုတော့ မိတ်ကပ်လိမ်းတဲ့ ယောင်းယောင်းလေးတို့ သိထားသင့်တဲ့အချက်လေးတွေကို အက်မင်က မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။
ယောင်းတို့သွားမယ့် နေရာအလိုက်သင့်တော်မယ့် ဆံပင်ပုံစံတွေ
Posted on September 22, 2017 Author Su Myat
တောင်းမှာအကွပ်၊ လူမှာအဝတ်ဆိုသလိုပဲ. ကိုယ်သွားမယ့်နေရာနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ ဆံပင်ပုံစံလေးတွေလည်း ရှိသေးတယ်နော်…
ထက်မြက်တဲ့ မိန်းကလေးတွေက ဘာလို့ Single ဘဝမှာပဲပျော်နေကြတာလဲ